QR Reader: QR Code Reader & Barcode Scanner Android အတွက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » QR Reader ကို: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို & ဘားကုဒ် Scanner
QR Reader ကို: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို & ဘားကုဒ် Scanner APK ကို
ဒီ app ကိုအခမဲ့ QR Reader ကိုဖြစ်ပါတယ်: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို & Bar ကိုကုဒ် Scanner, သင်တို့ရှိသမျှသည် QR ၏ကြင်နာနှင့်ဘားကုဒ်ကိုပြဿနာ, ရိုးရှင်းသောမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူဖြေရှင်းကူညီပေးသည်။ QR ဘားကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုသမိုင်းစာရင်းထဲမှာသင် scan ဖတ်သောအရာကိုစစ်ဆေးရန်, ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းကသူတို့က Android device ကိုအပေါ်ရှိရမည်, ထိုသို့ဘားကုဒ်သို့မဟုတ် QR ကုဒ်ကိုပုံစံများကိုဖတ်ရှု / QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးတာပိုမိုလွယ်ကူမယ့်သောဤ QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကို app ကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ QR Reader ကို app ကိုလည်းသင့်ရဲ့အယ်လ်ဘမ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်မှာဒီ app ကိုလည်းတစ်ချက်ချင်းကင်မရာကိုဘာသာပြန်ဆိုသူပါ!
QR Reader ကို: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို & ဘားကုဒ် Scanner app ကိုအားလုံး QR / ဘားကုဒ်ကိုအမျိုးအစားများနှင့်အခြားသောပုံစံများ scan ဖတ်လို့ရပါတယ်။ အစာရှောင်ရာ QR ကုဒ်ကိုစကင်နာသို့, သင့်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုဖွင့်။ ဤသည်ဘားကုဒ်ကို / QR ကင်နာအလိုတော်အလိုအလျောက်ဒီကုဒ်ဒါ။ တဖန်သင်တို့က၎င်း၏ကင်မရာဘာသာပြန်ဆိုသူသုံးပြီးအားဖြင့်ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်ရနိုင်သည်။
►QR Reader ကို app ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ
- လက်ငင်းဖို့အတွက် QR & ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
- Scan ကိုသမိုင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏
- စူပါအစာရှောင်ခြင်း & လွယ်ကူပါတယ်
►QR Reader ကို app ရဲ့အသုံးပြုမှု
ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ယူကျု့ဗီဒီယို -Scan QR ကုဒ်ကို
ကစာသားကိုပါရှိသည်ရဲ့လျှင် -Scan ကုဒ်,
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ID ကိုကုဒ် -Scan
-Scan နိုင်ငံခြားထုတ်ကုန်များ၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့် Real-time ဘာသာပြန်ချက်
အဆိုပါဘာသာပြန်ဆိုလုပ်ဖို့အခြားဘာသာပြန်ချက် app ကိုရဖို့ -No လိုအပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ QR Reader ကိုဖွင့ ်. : ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို & ဘားကုဒ် Scanner app ကို android ဖုန်းအဘို့ဤ QR ကုဒ်ကိုစကင်နာ app ကိုအလိုအလျှောက် QR ကုဒ်ကိုသို့မဟုတ်ဘားကုဒ်များ၏သတင်းအချက်အလက်များ scan နှင့်အသိအမှတ်ပြုရန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး QR သို့မဟုတ်ဘားကုဒ်သို့မဟုတ်အခြားကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးနောက်သင်သည်နောက်တဖန်သူတို့ကိုစစ်ဆေးချင်အမှု၌, ရှိသမျှကိုသင်၏ scan ဖတ် codes တွေကို, သမိုင်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။ အဆိုပါချက်ချင်းကင်မရာကိုဘာသာပြန်ဆိုသူ function ကိုကင်မရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုအမှန်တကယ်ချက်ချင်းဘာသာပြန်ဆိုသူပေး, အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်အပေါ်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွယ်ကူသည်။
တစ်ဦးက Android အတွက် QR & ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာ app ကိုမဖြစ်မနေ-ရှိသည်!
တချို့က bug တွေ -Fixed
QR Reader ကို: ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို & ဘားကုဒ် Scanner
4.73 ကို MB
က Hyper Dev မှ